Momba ny famokarana, ny fampisehoana ary ny tsiro | Avy amin'ny Linux
Amin'ny famokarana, ny fahombiazana ary ny tsiro
Izaho irery no mahalala ny zavatra malahelo ahy Xfce. Tsy haiko ny antony toa mbola tsy hitako fa ny interface Gtk, amin'ny lafiny fisehoana, dia kanto kokoa noho Qt, ary raha ampiantsika amin'izany ny fomba mora ampiasana azy. Xfce, ary mety ho tsara tarehy toy inona, satria heveriko fa maro no hahatakatra ny fomba fijeriko.
Saingy ho an'ny tsy misy miafina izany fa tato anatin'ny volana vitsivitsy izay no nampiasako KDE, tontolon'ny Desktop izay tsy mila fampisehoana ary amin'ny habetsahana, izay rehetra anehoany sy izay atolony dia fantatra.
Amin'ny asako dia manana solosaina roa aho amin'ny asako isan'andro. Samy manana aho KDE, fa ao amin'ny iray amin'izy ireo (ny PC desktop) dia nametraka ihany koa aho kanelina miaraka amina fonosana marobe GNOME toy ny lozika ary ho safidy fahatelo napetrako Xfce 4.10.
Izaho dia mpampiasa izay manao asa manomboka amin'ny asa mahazatra indrindra, ary hatramin'ny sasany manokana. Ny fangatahako isan'andro dia: Firefox, KMail, LibreOffice, Pidgin, Kate, Konsole, Akregator, Quassel, Clementine, Inkscape, Gimp, Filezilla ary mazava ho azy, Dolphin.
Rehefa hiara-hiasa amin'ireo mpizara aho, na amin'ny rakitra anaovany, na rehefa hanao zavatra manokana kokoa noho ny mahazatra aho, dia hitako fa mora kokoa sy mamokatra kokoa ho ahy ny manao azy amin'ny KDE, ary asehoko anao ny antony.
Ho an'ity dia hilazalazako ireo dingana iray ihany amin'ny asa manokana, isaky ny tontolon'ny Desktop miaraka amin'ireo fampiharana azy ireo.
1 Dingana manaraka
3 Kanelina / Gnome.
Izao no hataoko mba hanehoana ny ohatra amin'ny famokarako isaky ny birao:
Sokafy ny File Manager.
Mikaroha mpizara lavitra raha mila rakitra manokana antsoina hoe Backup.sh ao anaty fampirimana misy fisie an-jatony.
Sokafy amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratry ny tontolon'ny Desktop tsirairay izany rakitra izany.
Amboary ny rakitra ary ataovy ny fanitsiana, toy ny kaody fanoratana na famafana tsanganana maromaro.
Tehirizo ilay rakitra ary adikao amin'ny mpizara lavitra.
Amin'izany dia heveriko fa ho ampy hanaporofoana ny teôliko ... Andao atomboka.
1.- Manokatra ny manager manager aho izay Thunar araka ny fantatry ny maro.
2.- Midira amin'ny SFTP mankany amin'ny mpizara lavitra miaraka amin'ny Thunar, izay amin'ny alàlan'ny default dia tsy manana motera fikarohana mifangaro, noho izany dia mila mikaroka maso ilay rakitra aho Backup.sh na manantena aho, manantena fa ny fanoratana ireo litera BAC dia hitondra ahy any amin'ilay fisie voadinika. Raha teo amin'ny kapila misy ahy ilay rakitra, dia afaka nampiasa aho Poisson-chat, Saingy tsy izany no izy.
3.- Raha vao hitako ilay fisie dia tsy maintsy alainiko amin'ny kapila eo an-toerana vao hosokafako Mousepad, satria tsy afaka manokatra rakitra lavitra ity rindranasa ity.
4.- Manampy kaody 10 aho, manoratra tsara ny teny tsirairay Mousepad tsy manana famenoana autocomplete ny variables na teny izay efa ao anaty fisie.
5.- Mba hamafana tsanganana tokana dia mila mandeha isan-tsipika aho Mousepad Tsy manan-tsafidy ao amin'ny Tsanganana.
6.- Tehiriziko ao amin'ny kapila eo an-toerana ilay rakitra, ary miaraka amin'ny Thunar Averiko amin'ny server lavitra ilay izy.
Kanelina / Gnome.
1.- Manokatra ny manager manager aho izay Nautilus o Nemo araka ny fantatry ny maro.
2.- Midira amin'ny SFTP mankany amin'ny mpizara lavitra miaraka amin'izy ireo, izay manana milina fikarohana ao anatiny, mba hahafahako mitady ilay rakitra. Backup.sh, izay antenaiko fa ho hitako ihany koa amin'ny fanoratana ireo litera BAC.
3.- Vantany vao hitako ilay rakitra dia sokafako miaraka aminy azon'ny gedit, izay raha mahay manokatra fisie lavitra.
4.- Manampy kaody 10 aho, manoratra tsara ny teny tsirairay azon'ny gedit, ahoana Mousepad, tsy manana famenoana autocomplete ny variables na teny izay efa ao anaty fisie.
5.- Mba hamafana tsanganana iray amin'ny lahatsoratra dia mila mandeha andalana isaky ny andalana aho Mousepad, tsara azon'ny gedit Tsy manan-tsafidy ao amin'ny Tsanganana.
6.- Tehiriziko mivantana amin'ny lozisialy lavitra ilay rakitra.
1.- Manokatra ny manager manager aho izay Dolphin ny mpitantana fisie default.
2.- Midira amin'ny SFTP mankany amin'ny mpizara lavitra miaraka amin'ny Dolphin, izay misy motera fikarohana mitambatra amin'ny alàlan'ny default, mba hahafahako mitady ilay rakitra Backup.sh na tsara kokoa, ampiasao ny bara fisivanany, fa rehefa manoratra ny anarana aho dia manaisotra ny ambin'ireo fisie ny feso feso, tsy mampiseho ireo izay mifanentana ihany rehefa manoratra BAC aho.
3.- Vantany vao hitako ilay rakitra dia sokafako miaraka aminy KATE.
4.- Manampy kaody 10 aho, afaka manavao ny variables efa nambara na teny voasoratra ao anaty rakitra, satria Kate manana izany safidy izany ianao.
5.- Mba hamafana tsanganana iray na maromaro, mila manetsika ny fomba fifidianan'ny Block (Ctrl + Shift + B) fotsiny aho.
Ilaina amin'ity ohatra tsotra ity ve ny milaza hoe amin'ny fotoana inona aho no namokatra bebe kokoa? Heveriko fa tsia, ary ohatra tsotra fotsiny no nolazaiko nefa tsy nisy andinindininy.
Tahaka ny nolazaiko tamin'ny olona iray indray mandeha, hoe inona no mahatonga KDE Tsy ny fisehony, na ny safidiny marobe, fa ny fitaovany. Ary afaka nanonona ohatra hafa aho, toy ny fiasa an'arivony an'ny Krunner, saingy eo anilan'ny teboka izao.
Ary averiko indray, tiako Xfce, fa na ity birao ity na GNOME, atolotr'izy ireo amiko ny safidy ilaina amin'ny fitaovan'izy ireo mba hahomby kokoa. Noho izany dia hitako fa mila misafidy ny famokarana mihoatra ny zavatra tiako manokana momba an'i Gtk aho. Ka mbola miditra aho KDE.
Angamba raha ny zavatra nataoko tamin'ny PC fotsiny dia zavatra tsotra toa ny fitetezana Internet, fihainoana mozika, hijerena horonantsary, na hijerena ny mailako, azoko natao tokoa Xfce, LXDE, Openbox, Xmonad ary mpitantana varavarankely hafa, fa raha mbola mila manao zavatra somary mandroso kokoa aho dia tsy afaka manafo-tena amin'ny famokarana atolotra ahy KDE.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Amin'ny famokarana, ny fahombiazana ary ny tsiro
Tena tsara, ary satria miresaka fampisehoana izahay dia nanao video mampiseho ny fomba hampihenana ny fanjifana ny KDE:
Raha te hiresaka momba ilay lohahevitra amin'ny lahatsoratra hafa ianao, dia azonao atao ny mampiditra ilay horonantsary, mazava ny dingana, na mieritreritra aho hoe hehe. Miarahaba ary mitohy toy izao!
PS: Mahafinaritra tokoa ny endrika vaovao * _ *
Nanao toy izany aho taloha tao amin'ny Fluxbox:
Ampidiro ny mpizara FTP ho fampirimana hafa miaraka amin'ny curlftpfs
Sokafy ny fisie miaraka amin'ny programa mifanaraka aminy (fisie an-tsoratra na ho an'ny zavatra haingana Leafpad, ho an'ny zavatra matotra kokoa Geany)
Ary rehefa mitahiry vola dia miakatra ho azy, eny, mihamangatsiaka ny programa, io no izy, fa raha hamaha zavatra haingana araka izay tratra dia mendrika izany.
Lahatsoratra tsara sy mahaliana. Fantatro fa tsy mitovy izy io, fa raha tianao ny fomban'ny GTK, azonao atao ny mampiasa ny motera QtCurve ao amin'ny KDE ary ampifanaraho araka izay itiavanao azy (mora ary manana safidy tsy manam-petra). Ankoatra ny fahazoana vokatra mihoatra ny azo ekena, ny birao dia mijaly amin'ny fiakarana kely sy tsy hay hazavaina. Ny zavatra rehetra dia "mahatsapa haingana kokoa".
Raha ny marina, QtCurve no tena ampiasaiko noho io antony io 😀 Misaotra tamin'ny torohevitra
Mpanaraka sy mpampiasa ny Gnome nandritra ny taona maro aho. fa herintaona lasa izay dia nifindra tany amin'ny KDE aho, tamin'ny alàlan'ny Chakra, ary tsy afaka nahafoy azy aho. mainka fa izao fa tsy tiako ny Gnome Shell.
XFCE no ampiasaiko, fa LinuxMint XFCE ary ampiasaiko toy ny manager manager BOX, izay fork an'ny Nautilus rehefa tetikasa MATE. Mety tsara amiko izany fa nesoriko tanteraka i Thunar (izay toa tapaka hatreo amiko). Amin'ny farany dia manana XFCE aho fa miaraka amin'ireo fiasa ao amin'ny manager file Nautilus.
Tena mieritreritra aho fa toa adala ny fampiasana Thunar. Tsy misy afa-tsy ny ditran'ireo mpamolavola tsy mampiasa TABS dia ampy handefasana anao handeha.
BTW Nanandrana ny antsoina hoe SpaceFM (mpandimby ny PCManFM) indray mandeha aho ary tsara be izany.
Oswaldo dia hoy izy:
Salama tsara, ary maninona no tsy ampiasainao ny Xfce + Dolphin? na ireo fampiharana ilaina, miteny avy amin'ny tsy fahalalana aho.
Mamaly an'i Oswaldo
Amin'ny lohahevitra: fampidirana. Tsy mbola tiako ny mifangaro fivarotana boky, miampy ny fihetsika tsy mitovy.
Salama, ary tsy misy fomba hahatonga azy io haharitra tanteraka?
Mety eny, fa tadidio fa ohatra azo ampiharina sy tsotra no nomeko rehefa nampiasa KATE. Saingy tsy io fampiharana io ihany, misy maro hafa izay mitsitsy fotoana sy asa, fitaovana tsy maninona izay azonao ampiasaina amin'ny Xfce (raha niasa tsara izy ireo), dia tsy hitondra fihetsika mitovy amin'izany ... ary tadidio: fampidirana.
Ozkar dia hoy izy:
+5 ho an'ny lahatsoratra Ernesto, azonao atao koa ny mampiditra ny "allmighty" Okular amin'ireo fitaovana KDE mamokatra.
Valiny tamin'i Ozkar
Ny birao Linux rehetra dia tsara tarehy sy miasa, fa misy foana ny iray amin'ny fitiavana ahy dia ny <3 KDE <3
Owaldo dia hoy izy:
Salama, tsy hitanao va ny KDE mavesatra loatra amin'ny solosaina finday? Mba hahazoana fampisehoana tsara avy amin'ny bateria izay atoronao? Xfce? Kanelina ?.
Miarahaba anao, Xfce, tiako kely
Mamaly an'i Owaldo
Eny, manana KDE mihazakazaka ao amin'ny Netbook aho, eny, miaraka amin'i Nepomuk nonina ary lazaiko aminao ... mitondra tena toy ny Xfce ary tsara kokoa noho i Gnome.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Elav. Tiako be kokoa ny fisehoan'ny gnome na xfce fa amin'ny farany dia miverina any amin'ny kde foana aho noho ny fikirakirany mora foana. Ary tamin'izay nolazain'i Oswaldo momba ny fametrahana programa kde amin'ny gnome, ny olana dia ohatra ny fametrahana k3b (izay programa fandraketana linux tsara indrindra tsy misy mpifaninana) na feso feso ianao dia mila mametraka biraon'ny antsasaky kde (eo amin'ny 400 megabytes ao andohalambo) ary isaky ny mampiasa azy ireo ianao dia feno ny tranomboky qt.
Ny fanafoanana ny nepomuk, ny vokany ary ny sarimiaina, ny fanjifana sy ny valin'ny rafitra dia mitovy amin'ny fallback gnome. Manohitra ny hevitry ny maro ho ahy, ny teboka malemy kde dia ny hatsarana, mba hahatratrarako ny filako dia mila mandany ora maro kokoa aho noho ny fametrahana amin'ny lafiny mamokatra.
Mampihomehy ny fiheveran'ny mpampiasa Linux fatratra ny estetika. Ny ankamaroan'ny olona fantatro izay mampiasa windows dia zara raha manova ny valiha. Fa kosa isika manana ny olana amin'ny tsy maintsy misafidy aloha ny birao, ny kisary, ny stationery, ny lohahevitra fampidirana. Windosero "manafintohina" no nilaza tamiko fa satria manana lesoka be dia be ny Linux, dia nampionona ny tenanay izahay tamin'ny fandanilanana fotoana hanovana sary masina sy ny fandefasana ny birao. Novaliako fa satria tsy maintsy mandany fotoana amin'ny fandrafetana, ny fandotoana ary ny fanadiovana ny rafitry ny viriosy izy ireo, dia tsy afaka miahiahy momba ny tsy fahombiazan'ny tarehy. Inona no tena ananan'ireo hevitra ireo? Lohahevitra mahaliana ho an'ny adihevitra hafa.
Javier Sola dia hoy izy:
Tsy maninona ireo mpitsangatsangana ny manohina ireo zavatra mahafinaritra, fa ovainao ny bikan'ny toerana fanombohana ary lasa adala izy ireo ary mikiakiaka mitady ny teknisianina.
Tantara tena nitranga.
Valiny tamin'i Javier Sola
Raha tianao ny gtk, tsy azonao ampiasaina ny style gtk amin'ny qtconfig?
Kde dia mety ho kanto ohatra:
Ny zavatra tiako indrindra momba ny kde dia ny krunner, plasmoids, kwin dolphin, okular ary ny safidin'ny rafitra izay malalaka be
Ny azoko ampiana dolphin dia rafitra iray mitovy amin'ny qtfm hanampiana hetsika manokana (qtfm dia toy ny manome antoka fa manampy baiko ianao, izay misy karazana rakitra, ary ny anarana tianao homena azy dia hita ao anaty menio)
Eny eny, tsara tarehy ireo lohahevitra napetrakao ireo. Raha ny marina, raha afaka manana ny fijeriko ElementaryOS mitovy amin'ny KDE aho indray andro, dia faly be aho 😀
Iza no mahalala, mety hanaiky izany ny BeShell ... Fa elaela vao hahatratra azy fa tsara ny vokany 🙂
ElementaryOS ho ahy ny birao Linux tsara tarehy indrindra ary iray amin'ireo mora indrindra indrindra koa, mampianatra ny reniko hampiasa azy aho 🙂
Raha mila lohahevitra kde tsara ianao dia ho fantatrao fa ny kde look sy deviantart no toerana aleha
Ao amin'ny BE shell dia toa tsara dia tsara, ireto misy hira roa tena tiako, heveriko fa mampanantena 🙂
Misaotra Vicky amin'ny vaovao. Io no ampiasaiko izao, ny qtcurve, ary ireo kisary fanabeazana fototra ho an'ny kde. Fa na dia miaraka amin'ny zava-drehetra aza aho, raha te ho fussy dia tiako ny manao gnome bebe kokoa na xfce mirindra tsara. Heveriko fa ny kde devs dia mino be fa io no birao tsara tarehy indrindra ary miaraka amina 100% azo amboarina izy ireo dia mamela ny birao ho ratsy tarehy foana.
Somary zaraiko aminareo ihany izany rehetra izany ... izany hoe, arak'izay azoko atao hitovy amin'ny Gtk ny KDE, tsy haiko, tsapako fa tsy mitovy izany ... fa efa zatra ny zavatra rehetra ...
Edgar J. Portillo dia hoy izy:
Eny, toa izaho no nahazo tombony ... Amin'izao fotoana izao dia mandeha miadana ny KDE ary tsy mampino ahy ny solosaina findainy ... Na dia mahatratra Gbyte farafahakeliny sy CPU fotsiny aza ny fanjifana RAM amin'ny 50/60 ... Mampiasa Kubuntu aho, efa nandre fanimbana aho fa Heveriko fa tsara izany, niasa tsara tamiko nandritra ny fotoana ela nefa tsy hitako izay nataoko mba hampihenana azy ... Raha ny tokony ho izy dia miombon-kevitra amin'i Elav aho, i KDE no anisan'ny tsara indrindra amin'ny zavatra iray (raha tsy ny tsara indrindra) ... fanontaniana izany ny fampifanarahana…
Valiny tamin'i Edgar J. Portillo
Tsy azoko hoe mitady ilay rakitra ao Thunar aho, satria raha ny amiko dia tsindrio ny fampirimana ary manoratra fotsiny ny anaran'ilay rakitra na fampirimana izay tadiaviko aho dia mitondra ahy mivantana mankany aminy, tsy fantatro ny antony tsy maintsy hijerenao maso maso ilay rakitra. (mampiasa Thunar 1.2.3)
Io ilay rakitra tadiaviny dia ao amin'ny mpizara FTP.
Notsapaiko tamina mpizara FTP (Mozilla manokana) ary mety ihany koa, raha ataonao avy any Thunar na dia tsy eo an-toerana aza ireo rakitra dia azonao atao ihany koa ny mikaroka ny fomba fanehoako hevitra.
Ataoko toy ny any Nautilus toy ny any Thunar izany, heveriko fa amin'ny Dolphin dia afaka nanao izany koa aho.
Fanontaniana adaladala: Efa nampiasa ny sivana Dolphin hitady rakitra na lahatahiry ve ianao? Satria raha mbola tsy nampiasa azy ianao dia tsy ho azonao ny fomba fijeriko 😀
Tsy nampiasa azy aho, tsy nilalao Dolphin efa ela, fa ny tiako holazaina dia ny manoratra ny teny hoe "backup.sh" amin'ny Thunar ka hitarika anao mivantana any amin'ny fisie ohatra. Tsy fantatro tsara ny fomba fiasan'ny sivana Dolphin.
Ry namako, avelako pikantsary ho anao ianao raha tsy nanazava tsara momba ny tenako aho na tsy mitovy amin'ny tianao holazaina, ny motera fikarohana dia ampidirina miaraka amin'ny Ctrl + F, zavatra tsy nolazaiko ihany koa izany.
Ao amin'ny fisamborana dia azonao atao ny mahita ny boaty fikarohana eo ankavanana sy eo ambany.
lavitra ny manao izay ataon'ny sivana Dolphin, ary rehefa mampiasa marika ianao ...
Azonao hazavaina ve izay ataon'io sivana io ary inona no maha samy hafa azy? Izy io dia tsy hitako hoe inona ny tombony manoloana izay ahariharin'ny mpanoratra «kikee» mpanoratra forum.
Jereo, zavatra tsotra nefa tsara tarehy: Rehefa manoratra ianao dia manjavona ireo lahatahiry sy rakitra, ary izay mifanaraka amin'ny zavatra soratanao ihany no tavela.
Ny sasany amintsika dia tsy niova hevitra, ary ireo izay manana, dia arahaba tsara! Tonga saina izy ireo tamin'ny farany ...
Etsy an-danin'izany, satria manoratra amin'ny Epiphany aho ary mampiseho ny bilaogy fa avy amin'ny Chromium 17 no anaovako azy?
Alrep dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara Elav! 🙂 ary Misaotra an'i Thunder noho ny rohinao, fanampiana be io.
Valio i Alrep
Misaotra anao nijanona ary naneho hevitra 😀
Misy lohahevitra XFCE Hazavana sy minimalista ary tsara jerena? 🙂
BlueBird, GreyBird, Elementary ...
Misaotra, azonao atao ve ny manangana lohahevitra momba an'io (Lohahevitra, sary masina sns), ary miala tsiny raha efa noforonina izy io.
Miarahaba ary misaotra betsaka indray!
Vao tsy ela akory izay no nampiasako ny XCFE hiasa ary marina fa manao zavatra "hafahafa" amiko io, toy ny rehefa misintona fisie mankany amin'ny birao ary esoriko avy ao amin'ny folder misy azy io na dia tazoniko aza ny lakilen'ny Ctrl. (Afindraiko aho fa tsy maka tahaka).
Fa avy eo rehefa manao ny mifanohitra amin'izay aho! Ny fisarihana fisie (sary jpg) avy amin'ny birao mankany amin'ny fampirimana sary, dia alahako ao anatiny fa tsy "afindra" amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa.
Hitako ihany koa fa vitsy ny safidiny rehefa tsindrio havanana amin'ny rakitra iray na maromaro ... Na dia hitako aza mihatsara ireo antsipiriany ireo isaky ny fanavaozana!
Thunar dia tsara, tsotra ary tsotra ho an'ny ekipako ...
Ny mpanoratra an'ity bilaogy ELAV ity, heveriko fa ny anarany dia; Te-hampita ny fisaorana feno noho ny torohevitrao aho, izay tena nilaina tokoa rehefa nanapa-kevitra sy nandray ny dingana farany mankany amin'ity rafitra ity avy amin'ny windows xp. Voalohany aho dia nianatra nampiasa ireo programa maimaimpoana Gimp, Inkscape, Libreoffice ary lava sns .. ary izao koa anjaran'ny rafitra fiasa Xubuntu.
Na dia tsy mahalala ny Linux aza aho, dia talanjona ny fihatsarany hatramin'ny nahitako azy farany. Ambonin'ny zava-drehetra dia noho ny fahaizan'ny intuitive izao, fa azo antoka fa tsy hisy zavatra ho mora raha tsy noho ny fanampiana sy torohevitra avy amin'ny olona toa an'i ELAV. Misaotra betsaka!
oscar - http://www.miutopia.com
Voalohany indrindra, Oscar: Tongasoa.
Izaho dia iray amin'ireo mpamorona ity bilaogy ity (miaraka amin'i KZKG ^ Gaara), ary iray amin'ireo mpanoratra azy, na dia maro aza isika. Misaotra anao tamin'ny hevitrao, satria faly izahay mahafantatra fa amin'ny fomba iray, ny zavatra ataonay dia manampy ireo mpampiasa mamaky anay isan'andro. Misaotra nijanona.
Fuck, tsy misy dikany ny antsasaky ny lahatsoratra:
Raha tokony hampiasa mousepad na gedit na kate ianao dia azonao ampiasaina, ohatra, Emacs -tsy amin'ny maody an-tsoratra sy amin'ny maody sary- izay ahafahanao manao izany rehetra izany amin'ny dingana roa amin'ny alàlan'ny fitambarana fitendry misy na mampiasa akorandriaka mifangaro; Heveriko fa ny Vim sy ny Gvim irery na miaraka amin'ny plugins dia afaka manao zavatra mitovy ihany - na dia somary mahasosotra aza, dia mbola Vi izy ireo.
Raha ny ambiny, marina izany: mandeha soa aman-tsara ny Dolphin 2.1 amin'ny KDE SC 4.9.2.
Tsy nahita toerana hafa hamelako ity fanehoan-kevitra ity aho, ary satria mivaky ny lohateny »… fampisehoana sy tsiro»; izany no antony anaovako azy.
Herintaona no nitrangan'izany tamiko rehefa nifandray tamin'i Pidgin aho, nanokatra ny solosainako fotsiny aho dia nahazo fampandrenesana: "Kaonty 1 no tsy afa-miasa satria nifandray tamina toerana hafa."
Efa nanandrana nanala azy tanteraka aho (manadio) ary mamafa ny folder .purple avy any / trano sy root fa tsy misy tranga dia manome an'io hafatra kely io indray izy.
Nanandrana Kopete sy Kmess aho ary tsy mifandray; Hoy izy tamiko: Tsy afaka mifandray amin'ny serivisy Live Messenger.
Noheveriko ho olana tamin'i Suse izany ary nifindra tany amin'ny Kubuntu aho ary manome hafatra mitovy hatrany. Nofafako ny zava-drehetra fa mbola.
Nanandrana emesene aho ary mitovy amiko ny voalaza ao amin'ny Pidgin: Mifandray amin'ny tranga hafa.
Ao amin'ny netbook-ko miaraka amin'ny Fuduntu dia mifandray tsy misy olana, na dia alohan'ny ahafahako mifandray avy amin'ny solo-saiko 2 amin'ny kaonty iray ihany aza raha tsy milaza amiko na inona na inona momba izay azoko izao aho rehefa manana milina iray fotsiny.
Misy fanampiana hafa ankoatry ny fampiasana programa hafa?
Andramo ny miditra amin'ny toeran'ny mpitondra hafatra, amin'ny alàlan'ny tranokala ... izany hoe, ao anatin'ny fikirakirana ny mombamomba anao MSN, Hotmail na Live, na aiza na aiza, dia tokony hahita safidy ianao raha afaka mifandray amin'ny toerana hafa, na zavatra mitovy amin'izany.
Miala tsiny aho raha tsy dia marina loatra, dia ny tsy nampiasa MSN na zavatra toy izany nandritra ny taona maro 🙁
Faly be aho raha manampy ahy ianao amin'ny fampisehoana amiko ny fomba fanaoko mba hahafahan'ny KDE amin'ny Debian manokatra rakitra avy amin'ny solosaina lavitra raha alaliniko any amin'ny kapila eo an-toerana izy ireo, tena kely dia kely ireo rakitra an-tsoratra ka maka tahaka azy ireo avy hatrany, fa raha mahita horonan-tsary ianao dia ho hitanao fa mandika azy ireo aloha .
Ny distro PCLinuxOS ihany no manana KDE afaka manokatra fisie lavitra, ny sisa dia nanandrana distros maro aho nefa tsy nahomby. Mpampiasa Debian aho noho ny filozofia ary tiako ho fantatra ny fomba hahatratrarako an'io toetra io
Partial Classification II: Bilaogim-bahoaka tsara indrindra tamin'ny loka Bitácoras 2012
Piraty toy ny fomba fiainana